Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Kibirka Montenegro waa Labada Tuulo ee Dalxiiska ugu Fiican Adduunka
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Wararka Montenegro • News • Dadka • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wtn
Alexandra Sasha (midig) ayaa Montenegro u matashay Golaha Guud ee UNWTO.
Montenegro, Hon. Jakov Milatovic waa wasiirka dhaqaalaha ku faani karo, Alexandra Sasha waa agaasimaha guud ee ku faani karo, iyo Xubin ka tirsan Guddiga Fulinta ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) - iyo Montenegro waa waddan sharaf leh. Laba tuulo oo miyi ah, iyo aqoonsiga UNWTO ayaa sabab u ah.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka waxay ku casuuntay Montenegro inay qayb ka noqoto hindise cusub oo loo yaqaan Magaalooyinka Dhaqanka ugu Fiican ama Gobollada Adduunka.
Agaasimaha Dalxiiska ee Montenegro Aleksandra Sasha, oo sidoo kale hogaaminayay Ururka Balkanka ee ururka in ka badan hal sano ayaa soo bandhigay awooda magaalooyinka yaryar, gaar ahaan magaalooyinka yaryar ee dhaqamada ee mararka qaarkood la iska indhatiray kartida dalxiiska caalamiga ah.
Ms. Sasha waxay sidoo kale ku matashay Montenegro shirkii loo dhan yahay ee UNWTO, Ururka Dalxiiska Adduunka.
Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) oo hindise cusub ku dhawaaqay ayaa sidoo kale aqoonsaday muhiimadda dalxiiska miyiga iyo bilaabay "Halka Tuulada Dalxiiska ugu Fiican".
Arrintan ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay shirkii guud ee UNWTO todobaadkii hore.
Mudane. Jakov Milatovic, Wasiirka Dhaqaalaha, Montenegro
Waxaa la aqoonsan yahay doorka dalxiiska ee ilaalinta tuulooyinka miyiga, oo ay weheliso muuqaalkooda, kala duwanaanshiyaha dabiiciga ah iyo dhaqameed, iyo qiyamkooda iyo waxqabadyadooda maxalliga ah, oo ay ku jiraan gastronomy maxalliga ah.
Laba tuulo oo ku yaal Montenegro ayaa lagu sharfay Mashruuca Tuulada Dalxiiska ee ugu Wanaagsan ee UNWTO: Godinje iyo Gornja Lastva ee Tivat.
PFarshaxanka hindisahan ayaa ah "Barnaamijka Horumarinta" kaas oo loo doortay 20 tuulo oo adduunka ah, iyo Montenegro waa dalka kaliya ee laga soo bilaabo ilaa laba tuulo.
Tuulooyinka waxa qiimeeyay guddi talo bixin oo madax-banaan oo ku salaysan shuruudo: dhaqanka iyo khayraadka dabiiciga ah; horumarinta iyo ilaalinta khayraadka dhaqanka; joogtaynta dhaqaalaha; joogtaynta bulshada; joogtaynta deegaanka; kartida dalxiiska iyo horumarinta iyo isdhexgalka silsiladda qiimaha; maamulka iyo mudnaanta dalxiiska; kaabayaasha iyo isku xidhka; iyo caafimaadka, badbaadada, iyo amniga.
Qorshaha Tuulada Dalxiiska ee ugu Fiican oo ay samaysay UNWTO
Dhammaan 44 ka tuulo waxay keeneen wadar ahaan 80 dhibcood ama ka badan 100kii suurtagalka ahaa.
Wadarta 174 tuulo ayaa waxaa soo jeediyay 75 dowladood oo xubin ka ah UNWTO. Dawlad kasta oo xubin ka ah waxay soo bandhigi kartaa ugu badnaan saddex tuulo hindisaha tijaabada ah ee 2021. Kuwaas oo 44 kamid ah ay UNWTO u aqoonsatay Tuulooyinka Dalxiiska ugu Wanaagsan. 20 tuulo oo kale ayaa geli doona barnaamijka cusboonaysiinta ee hindisaha. Dhammaan 64 ka tuulo waxay galaan si ay qayb uga noqdaan Shabakadda Tuulooyinka Dalxiiska ee ugu Wanaagsan ee UNWTO. Daabacaadda xigta waxay furmi doontaa Febraayo 2022.
Warqad uu xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili u diray wasiirka horumarinta dhaqaalaha Montenegro Jakov Milatovic ayaa lagu sheegay. Godinje iyo Gornja Lastva waxay taageero ka heli doontaa hay'adda Qaramada Midoobay ee ku xiran Montenegro waxay wanaajin kartaa doorka dalxiiska ee tuulooyinkan, si ay u ilaaliso dhulka miyiga ah. Warqaddu waxay ku nuuxnuuxsatay in dalxiisku uu noqdo mid horseeda horumarka, si si sax ah loo qiimeeyo tuulooyinka loona ilaaliyo hantidooda dhaqan iyo tan dabiiciga ah, iyo sidoo kale qiyamka saxda ah.
Dalxiiska Montenegro waa qayb ka mid ah faylalka wasiirka horumarinta dhaqaalaha ee dalka.
Wasiir sharaf leh, Mudane. Jakov Milatović wuxuu ku raacsan yahay awooddan gaarka ah waddankiisa yar ee gobolka Balkan wuxuu leeyahay marka ay timaado tuulooyinka dalxiiska ee yaryar iyo gobollada dhaqan ahaan muhiimka ah.
wasiirka Milatović waxaa loo yaqaanaa dowladda cusub ee Montenegro inuu yahay hogaamiye ku hagi kara dalka dariiqa dhaqaalaha iyo soo kabashada dalxiiska. Wuxuu hirgeliyaa fikradaha casriga ah ee habka dib u habeynta waxaana si fiican u taageera beesha caalamka.
Jakov Milatović waxa uu ku dhashay 1986, Podgorica, Montenegro, halkaas oo uu ku dhameystay dugsiga hoose iyo sare.
Waxbarashadiisii ​​heerka koowaad ee cilmiga dhaqaalaha ayuu ku qaatay kuliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Montenegro, isagoo celcelis ahaan fasalka 10-aad qaatay, wuxuuna ahaa arday jiilkii.
Waxaa lagu sharfay abaal-marinno badan oo gudaha ah oo uu ka helay Wasaaradda Waxbarashada, Jaamacadda Montenegro, Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Atlas Group iwm, iyo sidoo kale iskaashiga dibadda. Waxa uu hal sano oo waxbarasho ku qaatay Jaamacadda Gobolka Illinois isaga oo ka tirsan Dawladda Maraykanka; hal semester oo ka tirsan Jaamacadda Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee Vienna (WU Wien) oo ah Fellow Dawlada Austria; hal sannad dugsiyeedka Jaamacadda Rome (La Sapienza) oo ah xubin Guddiga Yurub ah.
Waxa uu shahaadada Masterka ee dhaqaalaha ka qaatay Jaamacadda Oxford. Wuxuu ahaa saaxiibkii dawladda Ingiriiska (Chevening).
Waxa uu khibradiisa shaqo ka bilaabay NLB Bank, Podgorica ee kooxda maareynta khatarta ee Bankiga, ka dibna Deutsche Bank, Frankfurt ee kooxda qiimeynta khatarta deynta ee Bankiga oo diiradda saaraya wadamada Bartamaha iyo Bariga Yurub.
Tan iyo 2014, wuxuu u shaqeynayay Bangiga Yurub ee Dib-u-dhiska iyo Horumarinta (EBRD) ee kooxda falanqaynta dhaqaalaha iyo siyaasadda, marka hore sida falanqeeye dhaqaale ee gobolka Koonfur-bari Yurub, ka dibna dhaqaaleyahan u ah wadamada Galbeedka Balkanka ee ka socda xafiiska Podgorica. 2018, waxaa loo dalacsiiyay madaxa dhaqaalaha ee wadamada Midowga Yurub, oo ay ku jiraan Romania, Bulgaria, Croatia iyo Slovenia oo ka socda xafiiska Bucharest.
Waxa uu khibrado kale ka helay barnaamijyada Qaramada Midoobay ee New York; dhigata dugsiyada iyo tababbarka German Konrad Adenauer Foundation ee Podgorica; Safaaradda Montenegro ee Rome; Xafiiska Iskaashiga Caalamiga ah ee Kulliyadda Dhaqaalaha ee Podgorica; Barnaamijyada Waxbarashada Oxbridge ee Oxford; Sanduuqa Lacagta Adduunka ee London; Dugsiga Dhaqaalaha ee London (LSE) iyo Jaamacadda Beijing; Akadeemiyada Hogaaminta ee Jaamacadda Stanford iyo Jaamacadda Belgrade iyo kuwa kale.
Waa aabbe laba carruur ah leh. Wuxuu si fiican ugu hadlaa Ingiriisiga, wuxuu ku hadlaa Talyaani iyo Isbaanish.
Diisambar 8, 2021 at 09:47
Waxaan ka qaatay laba ama saddex kook oo isaga ah, wuxuuna muujiyay diidmo aad uga weyn… Wuxuu ahaa hawl-wadeen aad u caajis badan, oo aan dan ka lahayn shaqadiisa. Waan ogahay, magaalooyinka Montenegro waxay qani ku yihiin dhismaha, laga soo bilaabo waqtiyo kala duwan oo qaata isbeddellada caalamiga ah, Montenegro waxay horumarinaysaa isboorti xad-dhaaf ah oo dalxiisayaasha.